အိမ်ဆောက်အခါပေးခြင်းနှင့် ရှေးထုံးအစဉ်အလာများ - YOYARLAY Digital Media and News
မကြာသောရက်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထံသို့ မတွေ့ရသည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးသည် အူယားဖားယားဖြင့် ရောက်၍လာတော့၏၊ “ လာရင်းကိစ္စက ဒီလိုရှိတယ် ဆရာကင်ရဲ့ . . . ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင် စီးပွားလည်း ပျက်နေတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ . . အခုလည်း အိမ်ထောင်ရေးက ကွဲမလိုဖြစ်နေတယ် . . . အကြွေးတွေကလည်း မဆပ်နိုင်ဘူး. . .ဒီကြားထဲ သမီးငယ်ကလည်း ကားတိုက်မိလို့ ဆေးရုံးရောက်နေတာ ခြေထောက်စတီးချောင်းထည့်ရမယ်. . . ဒီလိုတွေဖြစ်မယ်လို့ စိတ်တောင်မကူးဖူးဘူး၊ အခုတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေ လည်းဆိုတာ ကြည့်ပေးပါဗျာ” ဟုဆိုလေရာ ကျွန်ုပ်လည်း လွန်စွာရင်းနှီးသည်ဖြစ်သဖြင့် ကြည့်ပေးရတာပေါ့ ဟုဆိုပြီး သူ့လက္ခဏာနှင့် ဇာတာတို့ကို စစ်ဆေးရလေတော့သည်။
မိတ်ဆွေ၏ လက္ခဏာနှင့် ဇာတာတို့ကို စစ်ဆေးရာ ဂြိုဟ်နက္ခတ်တို့က ပြဆိုသော ကောင်းခြင်းဆိုးပြစ်များကို ပြောပြရလေ၏။ ထို့အခါ မိတ်ဆွေက လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲလောက်က အိမ်သစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအိမ်တွင် ပြောင်းနေသည့်အချိန်မှစ၍ ယခုကဲ့သို့ အဆင်မပြေခြင်းများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံရပြီး ပြသနာတက်နေကြောင်းပြောသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အိမ်ဆောက်ခြင်း၊အခါယူခြင်းနှင့် ရှေးထုံးအစဉ်အလာများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးဖြစ်တော့သည်။ကျွန်ုပ်က ယခုအခါ အိမ်ဆောက်အခါပေးခြင်းကို အခါပေးတွက်နည်းများစွာ၊ စနစ်မျိုးစုံ နည်းမျိုးစုံဖြင့် မိမိတတ်ကျွမ်းသောပညာရပ်ဖြင့် အခါပေးနေကြသည်ဖြစ်ရာ တစ်နည်းနှင့် တစ်နည်း မတူညီကြကြောင်း စတင်ပြောပြရလေတော့သည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်ဆောက်အခါပေးအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြရလေတော့သည်။
အိမ်ဆောက်အခါပေးအတွက် အခါလာတောင်းပြီးဆိုရင် အခါတောင်သူရဲ့ မွေးနေ့ ၊ရက်၊လ၊ခုနှစ်၊ မွေးချိန်၊မွေးဒေသတွေကို အရင်ဆုံးတောင်းရတယ်ဗျာ့၊ ဘာလို့လည်းဆိုတေ့ တြိစက္ကဇာတာကြီးဖွဲ့ ကြည့်ဖို့ပါဘဲ၊ ဒီလိုကြည့်မှ ဇာတာရှင်ဟာ ယခုအခါတောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အိမ်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ဖို့ ကံပါရှိသလား၊ဆောက်လုပ်ဖြစ်ရင် အပြီးတိုင်အောင် ဆောက်ဖြစ်မလား၊တစ်ဝက်နဲ့ ရပ်နေမလား၊ ဆောက်နေရင်နဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ စီးပွားရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေ ပေါ်မလား၊ စသဖြင့် မူလကံတရားကို အရင်စစ်ဆေးရတယ်၊ ဒါကအလွန်အရေးကြီးတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးလို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပုဂ္ဂိုဟ်ကို အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါ ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်။ သူရဲ့ မူလဇာတအရ ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမှ သူက မင်္ဂလာပြုအပ်သလည်း ဆိုတာကို စစ်ဆေးရတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးပြီးလို့ အဆင်ပြေတဲ့အခါမှ အိမ်ဆောက်အခါပေးကို လက်ခံလို့ရတာဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာအခါတွက်တဲ့အခါ သဗ္ဗမင်္ဂလာအခါပေးကျမ်းကိုအခြေခံပြီး နှစ်၏စင်ကြယ်ခြင်း၊လ၏စင်ကြယ်ခြင်း၊ ရက်၏စင်ကြယ်ခြင်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးရွေးရတယ်။ လက်သမားမြေခံ၊တိထီမြေခံတို့ ကောင်းမကောင်း၊ ရက်ကြမ်း၊ရက်ပုတ်တွေလွတ်မလွတ်ကိုလည်း ရွေးချယ်ရတယ်၊ ရက်ကိုရရင် အချိန်ကို ရွေးရတယ်၊ဒီအချိန်ကို ရွေးရတာကတော့ အတော်လေးလက်ဝင်တယ်၊ အချိန်ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာ ဇာတာပေါ်က လဂ်ကိုအခြေခံထားရပြန်တယ်၊ စရလဂ်နဲ့ ပေးရင် ဒီအိမ်ရဲ့အနာဂါတ်က ဘာဖြစ်တတ်တယ်၊ ထိရလဂ်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်၊ ဒွေသဟလဂ်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေခံက စပြီးစဉ်းစားရတယ်၊ လဂ်ထားတဲ့ ရာသီရဲ့ သဘော၊ စန်းရဲ့အခြေအနေ၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် ဆိုတာတွေကို ချိန်ရပြန်တယ်။ ပါပဂြိုဟ်တွေက အခါဇာတာရဲ့ ဘယ်အတန့်ဘာဝတွေမှာ ရှိနေသလည်း ဆိုတာကအစ အသေးစိတ်ရတယ်။ ဂြိုဟ်တစ်လုံးမှ လွတ်ထားလို့မရဘူး၊ ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်အားလုံးကို စဉ်းစားရတာဖြစ်လို့ အချိန်ယူပြီး ကျမ်းတွေနဲ့ အပြန်ပြန်စစ်ဆေးရတယ်။
ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါ အလုံးစုံကောင်းခြင်းတွေဘဲ ပြည့်နေတဲ့ အခါမျိုးဆိုတာက အလွန်ရခဲတာဖြစ်လို့ အနာအဆာအနည်းငယ်တော့ ပါတတ်တယ်။ ပါတဲ့အနာအဆာကို ဘယ်လို ယတြာနဲ့ ချေဖျက်စီစဉ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတွေးထားရတယ်၊ ဒီလို အဆင့်ဆင့်ရွေးထားတဲ့ အခါဇာတာကို မူလအခါတောင်းသူဇာတာနဲ့ ပြန်ပြီးတိုက်စစ်ရပါသေးတယ် ဒီလိုစစ်ပြီးရင်တော့ မုဟုတ္တ အခါပေးကျမ်းနဲ့ နောက်တစ်ဆင့် ထပ်စစ်ရတယ်၊ ယုဂ်တွေရွေးထုတ်ရပြန်တယ်၊ စန်းယှင်နက္ခတ်တွေကလည်း အရေးကြီးတယ်၊ အခါဇာတာကတော့ ကောင်းနေပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ယုဂ်မှာတော့ ကာလဒဏ္ဍယုဂ် (သေတတ်သောယုဂ်) ရနေတာမျိုး၊ ဓွံချယုဂ် (ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ဆုံးစေတတ်သောယုဂ်) ရနေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဒီအခါဇာတာက ပြသနာကြီးတယ်၊ ပြန်ရွေးရပြန်တယ်၊ နောက်တစ်ခုက အိမ်ရှင်အတွက် ဝတ်ရမယ့်အဝတ်အထည်အရောင်ကအစ ဆင်မြန်းရမယ့်ရတနာ၊ဆောင်ရမယ့်ပန်း ဒါတွေကို ကျမ်းအတိုင်း တိတိကျကျစီစဉ်ရတယ်၊ ဒါက အခါရွေးတဲ့ အဆင့်ပါ။
အခါရွေးတဲ့အဆင့်မှာ အဆင်ပြေပြီးဆိုရင် နောက်တဆင့်က မင်္ဂလာအခါအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်. . . ဒါကတော့ အလွန်အရေးကြီးလို့ တတ်သိတဲ့ ဆရာကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပေးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ ကြိုးဆွဲ-ပန္နက်ရိုက်တဲ့ကိစ္စက အလွန်အရေးကြီးတယ်၊ ပန္နက်ကြိုးဆွဲတဲ့အခါ နဂါခေါင်းလှဲ့ရာ အရပ်ကို မူတည်ပြီး စဆွဲရတယ်၊ ပြီးရင် ကြိုးရင် ကြိုးဖျားကိုင်တဲ့သူတွေက အိမ်ရှင်ရဲ့ ပဥ္စပွတ်။ဆပွတ် နေသားတွေဖြစ်နေရမယ် ၊ အမြစ်နေ့သားက ပန္နက်တိုင်ကို ရိုက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ် ၊ဒီနေ့သားတွေကလည်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆောင်ပန်းတွေကို တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်း ဆောင်ထားရသေးတယ်၊ လွဲလို့မရဘူး။ အဲဒီလို ပန္နက်ရိုက်ပြီးရင် မင်္ဂလာအခါစောင့်ရတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ပေးထားတဲ့ အခါဆိုတာက ကြိုးဆွဲတဲ့ အချိန်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘဲ ပန္နက်တိုင်ကို တူးတဲ့ အချိန်ကို ပေးတာဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာအခါ စောင့်နေတဲ့ အချိန်တိုလေးမှာ မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေ မဖြစ်ရဘူး ၊မင်္ဂလာစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလုပ်ရတာမျိုးပါ။ ဒီလိုအခါစောင့်ပြီးလို့ မင်္ဂလာအခါ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ “ နဂါးလည်ပင်း၊ဂဠုန်နင်း၍၊မြီးရင်းဟိုင်းစီး၊ ကြွက်ကြီးဝမ်းဖောက်၊ ကျောင်းအိမ်ဆောက်သည်” ဆိုသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာနေ့သားတွေက သက်ဆိုင်ရာဆောင်ပန်းတွေကိုဆောင်ပြီး ဂြဟဇာ ပွင့်ရာအရပ်ကို မျက်နာမူလို့ တူရွင်းနဲ့ ပန္နက်တိုင်ကို သုံးဦးသား တစ်ပြိုင်တည်း တစ်ချက်တည်း တူးထုတ်ရတယ်၊ တစ်ချက်တည်း ပန္နက်တိုင်ကလည်း ကျွတ်ထွက်ရမယ်။
ဒီလိုမင်္ဂလာကိစ္စအောင်တဲ့အခါ တူးထားတဲ့ ဦးရူးတိုင်နေရာမှာ မင်္ဂလာအောင်ဂါထားကို ရွတ်ဖတ်ပြီး နဂါးတွင်း နဂါးစာချရတယ်၊ ရွေရည်ငွေရည်လောင်းပြီး လာတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို ဧည့်ခံရတယ်၊ ဒီအဆင့်တွေမှာ ဦးရူးတိုင်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ပြောချင်ပါသေးတယ်၊ဥပမာ ခြံရဲ့ မျက်နာမူရာအရပ်က အရှေ့ဆိုပါစို့၊ နဂါခေါင်းအလှည့်က အနောက်လှည့်ချိန်မှာ အခါပေးတယ်ဆိုရင် ဦးရူးတိုင်က အရှေ့ဘက်မှာ မဖြနိုင်တော့ဘူး၊ အထက်ကတူးခဲ့တဲ့ တွင်းထဲက ခေါင်းနေရာနဲ့ ဝမ်းနေရာတွေ ထားလို့ရပေမယ့် အမြီးနေရာကိုတော့ ထားလို့မရဘူး၊ ဒီတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ဦးရူးတိုင်ထားမယ်ဆိုရင် နဂါအလှည့်ကိုကြည့်ပြီး စောင့်ပြီးမှ အခါယူရမှာ၊ ဒီလိုမစောင့်နိုင်ရင် ရတဲ့နေရာထားလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအယူအဆကတော့ ကျမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူနိုင်ပါဘူး၊ ဒီလိုစနစ်တကျ စီမံပြီး မင်္ဂလာအခါယူဆောင်ရွက်တဲ့ ကြိုးဆွဲပန္နက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဦးရရူးတိုင်ထားမှ အိမ်က မင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ် . . . လို့ ကျွန်ုပ်က မိတ်ဆွေဖြစ်သူကို ရှင်းပြရလေသည်။
မိတ်ဆွေဖြစ်သူက “ ဒါဆိုရင်တော့ ဒုက္ခပါဘဲ . . . ကျွန်တော် အိမ်ပန္နက်ရိုက်တော့ အိမ်နောက်မှာ ဦးရူးတိုင်ကျနေတော့ မထားချင်ဘူး အရှေ့ဘက်ဘဲထားဆိုပြီး အရှေ့ဘက်ကို ဦးရူးတိုင်ထူးမိတယ်ဗျာ့ . . . နောက်ပြီး ကြိုးဆွဲတာကလည်း တွေ့တဲ့သူဆွဲတာ ကျင်းတူးတော့မှ နေသားတွေနဲ့တူးတာ” ဟုပြောပြီး ခေါင်းကိုသာ သွင်သွင်ကုတ်နေတော့သည်။ မင်္ဂလာအခါ မတွက်ချက်၊အခါမယူဘဲ ဒီတိုင်းဆောက်မိသည်ဆိုပါက တစ်မျိုးစဉ်စားရ မည်ဖြစ်သော်လည်း အခါယူပြီး စနစ်မကျသည့်အခါ အပြစ်ဖြစ်ပြီး ခိုက်တတ်သည့်သဘောကို သေချာရှင်းပြရလေ တော့သည်။ ထိုအခါ မိတ်ဆွေကလည်း မင်္ဂလာအခါ၏ နက်နဲသော အကြာင်းနှင့် အကျိုးတို့ကို သေချာနားလည် သဘောပေါက်၍ သူ၏အိမ်အားမည်ကဲ့သို့ ပြုပြင်သင့်သည့်ကို မေးမြန်းလေတော့သည်။
မင်္ဂလာအခါမှားလို့ဖြစ်စေ၊ တိုင်ထောင်မှားလို့ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အမှားတစ်ခုခုဖြစ်လို့ အိမ်ခိုက်နေပြီဆိုရင် အဲဒီအိမ်မှာနေတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး လူကြီးသူမကအစ ကလေးသူငယ်အဆုံး ခိုက်နေတတ်တယ်၊ ခိုက်နေတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေက စီးပွားပျက်တယ်၊ ရန်ပေါ်တတ်တယ်၊ ကျန်းမာရေးတွေ ချုချာလာမယ်၊ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းတွေ ခံရတတ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ပြီးဆိုရင် မူလအခါရဲ့ သတ္တိတွေက ရိုက်ခတ်နေတာဖြစ်လို့ ဒီအခြေအနေကို ပြန်ပြီး ပြုပြင်ရတာက မူလအစမင်္ဂလာအခါပေး ရတာထက် ပိုပြီးခက်တယ်၊ ကျွန်ုပ်လည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာကြီးများထံ ပြေးပြီး မေးမြန်းနီးနာခံယူနေရတာပါဘဲ၊ အခုလိုပြောပြတာကလည်း ကျွန်ုပ်သိသဘောက်ပြောပြရတာ၊အခါပေးဆိုတာက အလွန်နက်နဲတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ အလင်းသင့်တဲ့အချိန်တိုင်းဆရာ့ဆရာကြီးတွေထံမှာ သင့်ယူနည်းနာခံနေရတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေလည်း သူ၏အိမ်အား ဘယ်ကဲ့သို့ ပြုပြင်ရမည်ကို မေးမြန်းရာ အကောင်းဆုံးပြုပြင်ရမည့်နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျတွက်ချက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု ကတိပြုလိုက်ရလေသည်။ အိမ်ဆောက်ပန္နက်ရိုက်မင်္ဂလာဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျတွက်ချက်ပြီး သေသေချာချာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအိမ်ဟာဖြင့် အသက်ရှည်ခြင်း၊ စီးပွားရာထူးတိုးတက်ခြင်း၊ ဂုဏ်ကြက်သရေတိုးခြင်း၊ မိသားစုပျော်ရွှင်ရခြင်း၊ မကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းလွတ်ခြင်း စတဲ့ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဟာ နေထိုင်သူတွေအပေါ် တစ်ပွေတစ်ပိုက်ကြီးရရှိခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရာ မိတ်ဆွေလည်း လွန်စွာဝမ်းသာလျှက် ရှိလေတော့သည်။
Previous Previous post: Huawei မှ ၎င်း၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ
Next Next post: နေရောင်ဒဏ်က ကာကွယ်ကြပါ
အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ ဆရာကင်္ကသူရဲ့စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒ ဟောစာတမ်းကို ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၂၃-၉-၂၀၁၈ မှ ၂၉-၉-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ Post Views: 3,172